Dal Kale Oo Carab Ah Oo Ogolaaday Inuu Xidhiidh La Sameysto Israa’iil – somalilandtoday.com
Dal Kale Oo Carab Ah Oo Ogolaaday Inuu Xidhiidh La Sameysto Israa’iil
(SLT-Khartoum)-Sudan ayaa shalay ogolaatay inay noqoto dalkii ugu dambeeyey ee Carab ah ee xidhiidh diblomaasiyadeed oo rasmi ah la yeesha Israa’iil, sida uu ku dhowaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa bishii hore waxay munaasabad ka dhacday Aqalka Cad heshiis rasmi ah kula saxeexdeen Israa’iil, hase yeeshee xidhiidhka Sudan ayaa la rumeysan yahay inuu kasii muhiimsan yahay.
Trump ayaa ku dhowaaqay heshiiska ay ogolaatay dowladda rayidka ah ee hal sano jirka ah ee Sudan daqiiqado kadib markii uu si rasmi ah dalkaas ugu saaray liiska dalalka taageera argagixisada.
Trump ayaa qadka taleefonka kula hadlay hoggaanka Sudan iyo ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu.
“Waxaan si deg deg ah u ballaadhineynaa garaangarta nabadda adiga oo na hogaaminaya,” ayuu yidhi Netanyahu, oo tixraacaya Trump.
“Dalal kale oo badan ayaa xigi doona,” ayuu yidhi madaxweyne Trump
Ayada oo qeyb ka tahay heshiiska looga saaray liiska argagixisada, ayaa Aqalka Cad waxa uu sheegay in dowladda Sudan ay bixisay lacag 335 milyan oo dollar ah oo magdhow ahaan loo siinayo qoysaska dhibanayaashii weerar argagixiso oo lagu qaaday dad Mareykan ah intii uu xukunka hayey madaxweyne Al-Bashiir, xilligaas oo Osama Bin Laden uu joogay Sudan.
Ra’iisul Wasaaraha Sudan Abdulla Hamdok ayaa twitter-ka uga mahad-celiyey madaxweyne Trump, isaga oo aan xusin Israa’iil.
Israa’iil iyo Sudan ayaa qorsheynaya inay billaabaan furista xidhiidho dhaqaale iyo ganacsi, iyo inay soo celiyaan safaaradihii dal walba uu ku lahaa dalk kale.